नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कवि बसन्त चौधरी नेपालका त्यस्ता कवि हुन जसका कविता "बसन्त" ९ वटा भाषामा प्रकाशित छन !
कवि बसन्त चौधरी नेपालका त्यस्ता कवि हुन जसका कविता "बसन्त" ९ वटा भाषामा प्रकाशित छन !
कवि बसन्त चौधरी नेपालका त्यस्ता कवि हुन जसका कविता "बसन्त" ९ वटा भाषामा प्रकाशित छन । यस अघि कुनै नेपाली कविको ९ वटा भाषामा कविता प्रकाशित भएको रेकर्ड छैन । उद्योगी, ब्यबसायी तर सधै नेपाली माटो बोल्ने कवि बसन्त नाम अनुसारकै बसन्त छन । उनको सरलता, मिलनसार पन, नेपाली मन लाई सधै सलाम गर्न मन लाग्छ मलाई पनि । मेरा साथी राजेन्द्र शलभ सँगै मेरा अत्यन्त आदरणिय दाई, कवि बसन्त चौधरीसँग नेपाल बसाइका क्रममा भेटघाट र भलाकुसारी अत्यन्त सार्थक रह्यो । बसन्त दाई, तपाईंबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ । तपाईंको सधै हाँसो, खुशी, सफलता र साहित्यिक क्षेत्रमा यहाँ को योगदान अझ प्रगाढ र स्मरणिय बन्दै जाओस मेरो सुभेक्ष्या र शुभकामना छ । यहाँको न्यानो आतिथ्यका लागि, साहित्यिक कृतिहरु उपहारका लागि आभारी छु दाई । तपाईंको सधै जय होस ।
Posted by www.Nepalmother.com at 5:27 AM